Ilhaan Cumar: “Obama waxaa uu ahaa dilaa dhoola cadeeya” – Radio Daljir
Ilhaan Cumar: “Obama waxaa uu ahaa dilaa dhoola cadeeya”
Maarso 9, 2019 6:35 b 0
Xildhibaan Ilhaan Cumar oo katirsan Congerska Mareykanka, kana soo gashay xisbiga dimuqraadiga ayaa weerar afka ah ku qaaday madaxwaynihii 44aad ee Mareykanka Brack Obama ay isku xisbi kasoo wada jeedaan.
Ilhaan ayaa ku tilmaantay Obama nin dilaa ah, haddana dhoola caddeeyaya, iyadoona isbar badhig ku samaysay madaxwaynihii hore Mareykanka Obama iyo Donald Trump.
Hadalka Ilhaan Cumar ayaa dhaliyay buuq xooggan oo xisbiga dimuqraadiga dhexdhiisa ah, waxaana sidoo kalle hadalkan ka faa’iidaysatay warbaahinta Yuhuudda, maadama horay ay u sheegtay hadal ka caraysiiyay hay’adaha taageera Yuhuudda iyo xildhibaanada Mareykanka qaar ka mid ah.
Ilhaan Cumar ayaa ah gabadhii ugu horaysay ee Muslim ah, kana soo jeedda Soomaaliya ee ka mid noqota congresska Mareykanka.
Qarax laga maqlay gurri ku yaala magaalada Muqdisho